Ukuzwisisa i-Lightning Network ngokusebenzisa i-Abacus (ifremu yokubala) | Exonumia
# Ukuzwisisa i-Lightning Network ngokusebenzisa i-Abacus (ifremu yokubala)
ngo Roy Sheinfeld 2018/03/25open in new window
Sengithole umbiko obuyako omnengi omuhle ngemva komtlolo-ndaba omfitjhani wami wesihloko esithi, Lightning Network is the Future of Bitcoin (Inethiwekhi emsinya ilikusasa le-Bitcoin). Kodwana, ngithe ngisafunda eminye yombiko obuyako, kubonakele kimi ukuthi abantu abanye abazwisisi ngokuzeleko ukuthi isebenza njani i-Lightning Network (LN) kuhle kuhle. Kulo mtlolo-ndaba omfitjhani, ngizokulinga ukuhlathulula ihloso ye-LN neendlela zayo zokubhadala ngokuberegisa isifaniselano se-abacus, ngaphandle kokungenelela khulu ekuphumelelisweni ngokwehlelo elibekiweko le-LN elinqophileko.
Manjesi, cabanga umsele wokubhadala we-LN njengedarada yinye ye-abacus, lapho umncamo ujamele i-bitcoin engaphakathi komsele. U-Alice bano-Bob nabavula ihlelo lokubhadala phakathi kwabo, u-Alice ufaka ama-bitcoin abuya kwi- Blockchain (irekhodi lokuthengiselana) ngaphakathi kwehlelo. Okwanjesi, ama-bitcoins la (isb. ama-bits ayi-10 nanyana i- 0.00001 BTC) ngewaka-Alice. Kulesi sibonelo, umncamo ngamunye ulingana necezu linye:
Idarada ye-abacus kunye nehlelo lokubhadala zinemikghwa efanako:
Iberega amahlangothi wombili: njengoba umncamu edaradeni ye-abacus ukghona ukutjhidela kwesincele uye kwesokudla uphinde kodu usuke kwesokudla uye kwesincele, ama-bitcoin nawo ayakgona ukusuka ku-Alice adlulele ku-Bob bese asuke ku-Bob adlulele ku-Alice.
Ubunikazi: kwi-abacus, umncamu ungaba kwesincele namkha kwesokudla, ngeze wawuthola uhleli phakathi wedarada. Ngokufanako, ama-bitcoin asehlelweni lokubhadala angaba ngewaka-Alice namkha u-Bob.
Aqinisweko: njengokufana nomcamu awungezeleleki namkha ususwe edaradeni, u-Alice bano-Bob bayakghona ukutjhintjhelana ama-bitcoin phakathi kwabo, ukufikela enomborweni ebekiweko nabathoma ukuvula ihlelo lokubhadala. Nakibe bafuna ukutjhintjhelana inomboro ekhudlwana yama- bitcoin, kuyofanele ukuthi benze ukuthengiselana okunye kwe-on-chain.
Le yindlela ihlelo lokubhadala lingakhona ngemva kokuthi u-Alice athumele amacezu ayi-2 ku-Bob:
Kwanjesi u-Alice unemincamu eyi-8 bese u-Bob unemincamu eyi-2. Nje, asithi u-Bob naye uhlangene ne- LN ku-Carol asebenzisa ihlelo lokubhadala le-10 bit:
Nge-LN, u-Alice uyakghona ukubhadala u-Carol ngo-Bob. Esifanisweni se-abacus, nakibe u-Alice ufuna ukuthumela amacezu ayi-2 ku-Carol, ususa imincamu eyi-2 edaradeni ka-Alice-Bob ayise ngesokudla (ku- Bob), bese u-Bob ususa imincamu eyi-2 edaradeni ka-Bob-Carol ngesokudla (ku-Carol). Le yindlela eqaleka ngakhona ngemva kokuthi u-Alice athumele amacezu ayi-2 ku-Carol:
Kubalulekile ukutjho ukuthi nangabe u-Bob uyavuma ukuhlanganyela kulokhu kuthengiselana, akakwazi ukwamukela imincamu ka-Alice ngaphandle kokukhambisa inomboro efanako ku-Carol.
Ngokuberegisa isifaniselano se-abacus, kulula ukuhlathulula imvelo yokuthengiselana ye-off-chain LN ngokuvamileko, begodu khulukhulu ngikuphi okufunekako okufanele ihlelo lokubhadala libenakho ukuze likwazi ukuthengiselana. Ngesibonelo, kulula ukubona ukuthi u-Alice ngeze akghona ukuthumela u- Carol imincamu eminengi endlula le U-Bob angakghona ukuyiphatha. Bese godu, mhlambe ekuyeni kwesikhani uzokghona ukukwenza lokhu ngokusebenzisa ama-AMPopen in new window, kodwana leyo yindaba yomtlolo- ndaba omfitjhani omunye...
Nangabe, ufumane umtlolo –ndaba omfitjhani lo ulirhelebho, ngibawa ungalibali ukungezelela ukubetha izandla (gandelela isikhatjhana ukuze ukwazi ukungezelela ukubetha izandla kanenginengi ) bese wabelane yona.